Ungamodareyitha njani uMntu kwiTwitch? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uyenza njani into yokuba umntu abe yimodareyitha kwiTwitch?
Meyi 6, 2021 0 IiCententarios 322
I-Twitch liqonga elikhethekileyo Ngabasebenzisi abaninzi kwimakethi yangoku, inabasebenzisi abangaphezulu kweshumi elinesihlanu lezigidi mihla le, kukuhamba okumangalisayo kwababhalisi abanokuhamba ukusuka kwelinye ijelo ukuya kwelinye, ukuba babhalisile kwezo ziteshi, apho banokukhetha khona ukusasaza ezifana okanye ngubani onosulelo olunomdla kakhulu kubo.
Amaxesha amaninzi imilambo ifuna ukuba nemodareyitha, ukubaxhasa ngexesha losasazo ngqo, ngenxa yokuhamba okukhulu kwabalandeli kunye nemiyalezo eziza kubo. Gcina ukhumbula ukuba ayinguye wonke umntu othumela imiyalezo kumajelo athile ngumlandeli, kwaye abayithumeli imiyalezo engxoxweni ngeyona njongo iphambili.
Eyona nto icetyiswayo kukuba unomoya olungileyo xa usenza usulelo lwakho phila kwiPC yakho, Oku kuyakuthintela amaxesha akhathazayo xa ukwimizuzu ebalulekileyo yomdlalo wevidiyo owuphuhlisayo. Kubalulekile ukuba ube nemodareyitha efanelekileyo yomsebenzi.
Imodareyitha luhlobo lomlawuli, ophetheyo ekubekweni kweliso kwimisebenzi eyahlukeneyo eyenzekayo kwiiforamu ezahlukeneyo yeqonga ukunqanda amaxesha anzima, ezi zikhethwe ngabalawuli beqonga, hayi ngemilambo.
Iimodareyitha ziyaqhubeka uthotho lokucoca ulwelo apho bahlalutywa ngocoselelo ukubona ukuba baneempawu ezifanelekileyo okanye iimpawu ekufuneka bezenzile.
Zeziphi iimpawu ekufuneka zibe kuzo imodareyitha:
Imodareyitha kufuneka Ndinolwazi malunga nesihloko Iyanyangwa kumajelo aza kuwongamela. Phambi kosasazo ngqo.
Oku kuyakuvumela ukuba unike ulwazi olunomtsalane kubalandeli kwaye ngaloo ndlela bagcina umdla wabo.
Ngalo lonke ixesha yiba ngumxolelanisi kwaye ungenelele, wenze iqela elithatha inxaxheba kwi Ukuhambisa ukuziva ukhululekile kwaye kulungile.
Kuba Soloko uqhagamshele ngejelo kwaye uqaphele okwenzekayo.
Bonisa xanduva nokuthembeka.
Kwimeko apho unengqondo kumntu ongadibananga neqonga, unako bayakumema ukuba ujoyine uluntu lwaseTwitch.
Indlela yokujoyina iqela leemodareyitha:
Into yokuqala ekufuneka uyenzile kukuchongwa eqongeni, ungayenza ngeendlela ezimbini:
Khetha igama lomgqatswa kwincoko.
Mvumele fikelela kumsebenzisi wosasazo.
Nje ukuba isenzo senziwe, khetha icandelo "Ulungiso", emva kokukhetha igama lomgqatswa, alibonise ngophawu "+".
Bhala "ulungiso" ngokukhetha igama lomsebenzisi kwincoko yakho.
Emva kokubhala iodolo uza kufumana umyalezo apho kufuneka ufake igama lomgqatswa, oku kuya kunika amalungelo emodareyitha.
Nje ukuba inkqubo yenziwe, inkqubo iya kuyibonisa nge uphawu oluhlaza, ecaleni kwegama lakho.
Siyathemba ukuba olu lwazi luluncedo kuwe.
2 Zeziphi iimpawu ekufuneka zibe kuzo imodareyitha:
3 Indlela yokujoyina iqela leemodareyitha:
4 Enye yile:
Ungasonyusa njani okanye usinciphise isantya sevidiyo kwi-YouTube?
Ungasithulisa njani kwi-Instagram?